वैदेशिक रोजगारले ल्याएको परिवर्तन::
वैदेशिक रोजगारले ल्याएको परिवर्तन
प्रकाशित मिति : सोमबार, भदौ १८, २०७५
“होईन तिमीले मलाई फोनमा धेरै मायाको अनुभूत गरायौ । कहाँ र कसरी सिक्यौ हँ” पहिला त त्यसरी बोल्दैन थियौ त, यो कुरा रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा न. १ आचार्य गाँउका प्रमिला आचार्यलाई श्रीमान्ले दुवईबाट फोनमा भनेका हुन् । वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारको महिलाहरुको पहिला आफूलाई परेका समस्याहरु सुनिदिने कोही थिएनन्, सुनाएपनि उल्टै घरपरिवारलाई भनिदिएर झन झगडा बढ्थ्यो । सानो”सानो कुराले तनाव हुन्थ्यो । ठूलो मान्छेसँग रिस उठेपछि रिस पोख्ने भाँडो घरमा भएका बालबालिका हुन्थे । कामको बोझले गर्दा आफ्नो र परिवारको ख्याल गर्न पनि पाएका थिएनन् । तर अरुको कुरा काटेर बस्न पाए भने घण्टौ पनि बिताउने गर्दथ्यौ । अलि धेरै मान्छे भए भने बोल्न डराउने उनिहरु आफ्नो समस्या अरुलाई भन्न सक्दैन थिए । वैदेशिक रोजगारमा गएका आफ्ना परिवारका सदस्यहरुसँग फोनमा कुराकानी गर्दा पनि पैसा पठाई माग्ने कुरा मात्र हुँदा झगडा पर्ने गर्दथ्यो ।
नवकिरण सेवा समाज दुर्छिमले सञ्चालन गरेको सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी अन्तर्गत मनोसामाजिक परामर्श समुह छलफल सुरु भएपछि खोटाङको १४ समुहका १९७ जना महिलाहरुमा परिवर्तन आएको छ । उनीहरुमा आफ्ना परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारमा गएपछि भएका भोगाईहरु, बालबालिकामा देखिएका व्यवहार, कामको बोझले शरीर र स्वास्थ्यमा परेका असर, कामको व्यवस्थापन, कुरा काट्दा हुने फाईदा बेफाईदा र बैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुसँग फोनमा कसरी कुराकानी गर्ने भन्ने बिषयमा विभिन्न चित्र, कथा र खेल विधिबाट ७ वटा छलफल सकिएको छ । छलफलपछि भने सहभागी महिलाहरुले एकअर्काको कुरा सुन्ने बालबालिकाको पनि कुरा सुनिदिने कुटाईभन्दा पनि माया र हौसला दिने र कामको बोझ आफूले मात्र नलिई बाडफाँड गर्न थालेका छन् । घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको कुरा सुनिदिने र सहयोग गर्ने गरेका छन् । साथै अरुको कुरा काट्दा फाईदा नभई बेफाइदा मात्र भएकाले कुरा काट्न छाडेको र अन्य महिलाहरुलाई पनि भन्न थालेको रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा न. ९ की प्रमिला चौहान बताउछिन् ।
यसै सन्र्दभमा समुह छलफलमा सहभागी रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका वडा न. ८ की तारा आचार्यले भनिन् “म अहिले आफ्नो बालबच्चालाई कुट्न छाडेको छु । मनोपरार्श कर्ताहरुले सिकाउनु भए अनुसार श्वासप्रश्वास विधि र पानी पिउनाले धेरै पिर, चिन्ता र तनाव कम हुने रहेछ ।” उनीले पनि काममा बाडफाँड गर्न थालेको र आफैमा धेरै परिर्वतन भएको बताउँछिन् । समुहमा आफ्नो कुराहरु खुलेर राख्दा आफू खुशी भएको र वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुसँग फोनमा कुराकानी गर्दा पनि पहिला सञ्चो बिसञ्चो, काम, थकाइ, स्वास्थ्यको बारेमा सोध्ने अनि मात्र पैसाको कुराकानी गर्ने, पानी धेरै पिउने खाना समयमा खाएर पहिला आफ्नो शरीर बलियो भएमा मात्र सबै काम सजिलै गर्न सकिने रहेछ र आफू खुशी हुन सक्ने उपायहरु आफैले खोजी गरे खुशी हुन सकिने कुरा सहभागी जमुना राईले बताउँछिन् ।
साथै अप्ठेरोमा परेका महिलाहरुलाई आफूले बुझेका कुरा गरी समस्या समाधान नभएमा मनोपरामर्शकर्तासँग भेटाइदिने गरेका छन् । गएको एक बर्षमा सामी परियोजनाले आपतकालिन कोषबाट वैदेशिक रोजगारका कारण अत्ति प्रभावित १३ व्यतिmहरुलाई ३८ हजार बराबरको औषधि उपचारमा सहयोग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारका कारण समस्यामा परेका ११ पुरुष र ६२ महिलालाई मनोपरामर्श सेवा प्रदान गरको छ ।